XOG: Xasan Sheekh oo fariin uusan fileyn ka helay Ethiopia (Aqri) – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
XOG: Xasan Sheekh oo fariin uusan fileyn ka helay Ethiopia (Aqri)
Dowladda Federaalka Itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay taageera u raadinaysay dib u doorashada Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aakhirkii qiratay inay ku guul dareysatay inay ku qanciso beesha caalamka taageeradeeda Xasan.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailamaryam ayaa aakhirkii runta faraha ka saaray Xasan oo isbuuc gudahood tira sadex jeer ah booqdey Addis Ababa taasi oo noqonaysa markii ugu horeysey oo mas’uul Soomaali ah uu sidaas sameeyo, waxaana loo sheegay in Itoobiya ay ku fashilantay ku qancinta caalamka ee taageerada Xasan.
Itoobiya waxay u sheegtay Xasan in aysan fulin karin dhammaan balamihii ay la galeen oo aysan jirin taageera ay siin karto maadaama awalba dhaqaalaha ay ka raadineysay caalamka inay ka dhaadhiciso taageerada Xasan oo ay u arkayeen beel ahaan xilligan inuu yahay cida la taageeri karo.
Itoobiya iyo Imaaraadka ayaa la kala saftay laba musharax oo kasoo kala jeeda Hawiye iyo Daarood kuwaasi oo kala ahaa Xasan oo Itoobiya ay wadatay iyo Sharma’arke oo ay Imaaraadka wateen.
Si kastaba, waxaa hadda muuqata in Imaaraadka ka tanaasuleen Sharmaarke, halka Ethiopia ay Xasan ka iibin weysay caalamka.
Previous: SAWIRO: C/kariin X.Guuleed oo la dardaarmay Xildhibaanada BF ka dib markii..
Next: Faah faahin Qarax xalay xalay ka dhacay Kismaayo